Aza adino an-tserasera amin'ny marketing ivelany! | Martech Zone
Alarobia, Jona 11, 2008 Alahady, Desambra 10, 2017 Douglas Karr
Ny fitondran-tena amin'ny mpanjifa an-tserasera dia nanjary sarobidy ho an'ny mpivarotra an-tserasera, saingy tsy dia fantatra loatra momba ireo orinasa ivelan'ny Internet. Orinasa maro izay manana fivarotana antsinjarany, ary koa fivarotana an-tserasera, no mitsabo an-tsokosoko ireo mpijery roa, tsy mahita fotoana mety hitodihana sy hanarahana ny iray hafa.
Advanced Analytics ny rindranasa toy ny WebTrends, Coremetrics, ary Omniture dia noraisina ho toy ny rafitra fanaovana tatitra nefa mitazona ny angon-drakitra sarobidy ho an'ny mpanjifa izay azo zaraina sy ampiharina amin'ireo mpitsidika manokana ao anatin'ny data-nao.
Mpamatsy tolotra mailaka mitazona data momba ny fitondran-tena koa. Miaraka amin'ny Analytics ireo rafitra ireo dia afaka manara-maso ny fihetsiky ny mpanjifa manomboka amin'ny tsindrio mankany amin'ny fiovam-po. Ny fanosehana ireo mpitsidika anao an-tserasera dia manome làlana tsotra hanangonana ireo angona ireo. Ao anatin'ny tolotrao dia mahasoa ny mampiditra lakile tokana ho an'ny mpanjifanao tsirairay.
Tahaka ny ampidiroo ny kaody fampielezan-kevitra amin'ny sombin-kaonty mailaka mivantana, ny fananganana pejy fananganana hanangonana lakilen'ny mpanjifa tsy manam-paharoa dia fomba iray mahomby amin'ny fanarahana io mpamandrika io. Ity pejy fipetrahana ity dia afaka manome safidy alalana amin'ny marketing fanampiny. Ny lakile dia azo ampidirina amin'ny faran'ny adiresy tranonkala (URL) amin'ny alàlan'ny querystring (http://mycompany.com/'s=12345) ary tehirizina ao anaty cookie izay ahafahana manaraka azy manokana manerana ny tranokalanao.
Ny ankohonana manana fitomboan'ny fitondran-tena an-tserasera dia azo zaraina amin'ny lisitry ny mailaka mivantana sy ny telemarketing anao, fa kosa alefa imailaka - manome hafatra kendrena, ara-potoana amin'ny vidiny ambany lavitra. Zava-dehibe ny manamarika izany Fitsipika federaly CAN-SPAM mampihatra ary ny torohevitra tsara indrindra dia ny manangona adiresy mailaka an-tsitrapo ary miasa miaraka amin'ny olona mendri-kaja Mpanome tolotra mailaka izay manolotra serivisy fanaterana entana sy famoahana anarana hisorohana anao amin'ny olana.
Aza adino fa ny ezaka ara-barotra dia mety hamerina ny mailaka fifanakalozana ihany koa. Ny mailaka transactional dia mailaka rehetra antenaina ho valin'ny mpivarotra. Ohatra roa ny mpivady sy / na mividy hafatra fanamafisana. Raha manao fakti-bola an-tserasera ny orinasanao dia tsy mahazo fotoana voalohany ianao amin'ny fananana trano hividianana vola fanampiny na tolotra fanampiny!
Raha transactional voalohany ny hafatra dia tsy mila ampiharina ny CAN-SPAM. Aza hadino fotsiny ny mampifangaro ireo laharam-pahamehanao satria mety handoa lamandy ianao. Email Marketing dia manolotra atiny mavitrika mifototra amin'ny fizarazaran'ny mpanjifa. Io dia ahafahanao miovaova ny hafatra na ny sarin'ny mailaka mifototra amin'ny mpanjifanao.
Ny hafatra iray ho an'ny fianakaviana iray mifanohitra amin'ny mpianatra eny amin'ny oniversite dia mety manana verbiage sy sary hafa tanteraka - saingy mbola mivoaka amin'ny mailaka mitovy ihany! Ny rohy ao amin'ny mailakao dia azo alefa any amin'ny pejy na tranokala misy ny rafitra fitantanana atiny izay manolotra atiny mavitrika ihany koa. Ity data ity dia mety ho tena sarobidy amin'ny mpanao dokam-barotra koa!
Ny fahaizana mampifangaro ireo mpitsidika an-tserasera anao amin'ny angon-drakitra demografika dia fotoana lehibe iray hanomezana ireo mpilatsaka an-tsitrapo manana mombamomba demografika mahafinaritra sy fandalinana - ary ho lafo kokoa sy marina kokoa noho ireo serivisy an-tserasera mody manome izany.
Manomeza eritreritra vitsivitsy amin'ireo loharano data roa fanampiny ho an'ny datamart anao: Web Analytics ary mailaka Marketing. Ampiasao io angona io amin'ny marketing ivelany anao ary koa ampidiro ao amin'ny ezaky ny Marketing amin'ny mailakao! Hitahiry vola iray taonina amin'ny paositera maniry ianao ary afaka mandrefy valiny eo noho eo amin'ny Internet.
Tags: AnalyticsCan-amin'ny spamcoremetricsmail mivantanamailakampamatsy tolotra mailakaESPomniturevarotra nentim-paharazanawebtrends
Fa maninona i Typepad no nanao WordPress Anti-Spam Plugin?
13 Jun 2008 amin'ny 6:47 AM
Mampihomehy sa tsy izany; matetika loatra ny mpivarotra no mampihatra izany fomba izany amin'ny marketing. Ny teti-bola dia napetraka mialoha ary mifototra amin'ny fandraisana fomba mitovy amin'ny taloha. Na izany aza, tsy ilaina ve ny misaina hendry? Ka tokony hivoatra manodidina ny tokony hatao sa tokony hatao izao ny tetika? Manana ny fotoana ahafahantsika milalao fampifangaroana haino aman-jery lehibe kokoa ho an'ny fampielezan-kevitra izahay ary asehon'ny tantara amintsika fa ireo mpandinika ny famoronana no mahazo valisoa amin'ny fanatratrarana ny tanjon'izy ireo.
Ho an'ny orinasa, sy ny indostria, ny fireharehana amin'ny fanavaozana dia tsy tokony ho asa sarotra ny ho lasa zava-baovao kokoa.